Nokia ဖုန်းတွင် English-Myanmar Dictionary ထည်ချင်လို ပါ — MYSTERY ZILLION
Nokia ဖုန်းတွင် English-Myanmar Dictionary ထည်ချင်လို ပါ
May 2011 edited May 2011 in Other
Hi ..English to Myanmar dictionary ဘယ်လိုထည် ရမလဲ သိချင်လို ပါ.. ကူညီကြပါ........ဖုန်း က Nokia touch screen အမျိုးအစား ပါ.. :-( ဆိုင်က အဲ့ဒါ ထည်ရင် 10000 ကျမယ်တဲ့...
If you want, you can use ornaganai mobile dictionary for symbian. You can download from below link and give credit to kosaturn.
I got it. But I don't know how to install to handset.
Please give the guide to install.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကိုတို့ အခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်. ကျွန်တော် လိုအပ်တာတွေတော့ ဒေါင်းသွားပါတယ် စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် .. အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်... ;-)
အဆင််ပြေသွားပြီ ဗျို့ အစ်ကိုတို့ ကျွန်တော် မနေ့က ထည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ သွင်းလို့ရသွားတယ်.. ကို MMK က သွင်းနည်း မသိဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော် လုပ်တဲ့နည်းပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ် http://code.google.com/p/ornagai-mobile/downloads/list အဲ့မှာ ornagai mobile v2 ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ အဲ့ထဲမှာ ornagai mobile.jad ဖိုင် နဲ့ ornagai mobile.jar နှစ်ခု ကိုတွေ့ရင် အဲ့file နှစ်ခု ကို ဖုန်း ထဲ ထည့်လိုက်ပါ အစ်ကို ပြီးရင်.. ဖုန်းထဲ ကနေပြီး install လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်.. လုပ်နည်းက.. ဖုန်း ရဲ့ file manager ထဲ ကနေ ၀င်ပြီး ခုနက သွင်းလိုက်တဲ့ file နှစ်ခု ကို ရှာပြီး ornagai mobile.jar ဆိုတဲ့တစ်ခု ပေါ်မှာ နှိပ်လိုက်ရင် သူက install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်.. ပြီးရင် application ထဲ မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ. ornagai ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဒါဆို သွင်းလို့ရသွားပါပြီ.. သုံးတာတော့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး... ကျွန်တော် လဲ အပေါ်က အစ်ကိုတွေပြောပြတဲ့အတိုင်း စမ်းကြည့်တာပါ.. နည်းလမ်းပေးတဲ့ အစ်ကို တို့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ...
Thank for your instruction. But, I haveaproblem with Nokia C7 handset. When I installed it, it showed application is corrupted. I saw the icon of this dictionary in application but i cannot open it.
Isn't it compatible with C7?